အပျိုတော်များ နှင့် မင်းတုန်းမင်းကြီး သူလုပ်နေကျ ချိန်ဇယား… ဘယ်အချိန်တွေမှာဆို…??? – Myanmar Magazine
အပျိုတော်များ နှင့် မင်းတုန်းမင်းကြီး သူလုပ်နေကျ ချိန်ဇယား… ဘယ်အချိန်တွေမှာဆို…???
November 23, 2018 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
အလှည့်ကျ ပျိုတော်များ နှင့်မင်းတုန်းမင်းကြီး – ဘာတွေလုပ်..
မင်းတုန်းမင်းကြီးဟာ အရှင်ဘုရင်ဆိုပေမယ့် အေးအေးဆေးဆေး ဇိမ်ခံနေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ သူ့ချိန်ဇယားနဲ့သူ အလုပ်အလုပ်လုပ်နေခဲ့တာကို ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မနက်စောစော ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ အိပ်ရာကထတယ် ။ အပြင်မထွက်ခင် အလှည့်ကျ မိဖုရားများက သလွန်တော်အောက်ကနေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆီတော်များနဲ့ ပွတ်လိမ်းပေးရတယ် ။ ခေါင်းလိမ်းဆီ ၊ ကိုယ်လိမ်းဆီ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပြီး နှစ်မျိုးစလုံးဟာစပါယ် မြတ်လေး စတဲ့ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်တဲ့ အဖိုးတန်ဆီများဖြစ်ကြတယ် ။ ရေမချိုးလို့ မဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေကလွဲပြီး မင်းတုန်းမင်းကြီးဟာ ရေချိုးလေ့မရှိဘူးတဲ့ ။ ရေအစား ဆီတွေနဲ့ ပွတ်လိမ်းပြီး တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ ချေးညော်များနဲ့ မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်တွေကို သုတ်သင်တာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့နာရီဝက်ခန့် ကြာအောင် ကိုယ်မှာ ဆီတွေလိမ်းပြိး ကတိုးမှုန့်များနဲ့ ပွတ်လိမ်းတာကိုခံပါတယ်။
အလှည့်ကျ ပျိုတော်များက မင်းကြီးကျန်းမာရေးအတွက် အနှိပ်တော် ဆက်ကြရပါတယ် ။
အနှိပ်ခံပြီးနောက်မှာ အိမ်သာတော်ဝင်ပါတယ်။ အိမ်သာတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အလှည့်ကျ မိဘုရားများက တစ်ပါတည်းလိုက်ပါရာပြီး ထောက်လှမ်းချက်ရသောစကားများ ၊ အလိုတော် မေးတော်ရှိသော စကားများကို ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်သာမှထွက်လာတဲ့ အခါ နန်းတော်ဦး အရှေ့ပိုင်းမှာ သားတော်များက မျက်နှာသစ်ရေဆက်ကြရပါတယ် ။
မျက်နှာသစ်ပြီးနာက်မှာ ဆံတော်ရှင်းတယ် ( ခေါင်းဖြီးတယ် ) ။ နန်းမယ်တော်မိဖုရားခေါင်ကြီး (စကြာင်္ဒေဝီ) ရှိစဉ်အခါက နေ့စဉ်ခေါင်းဖြီးပေးရတယ်တဲ့ ။ မိဖုရားကြီး ကွန်လွန်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ကိုယ်တိုင်ဖီးပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မခိုင်း ၊ ဘယ်သူကိုမှ သူ့ဦးခေါင်းကို ကိုင်ခွင့် မပြု ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံ။
ပြီးတော့မှ ဝတ်တော်လဲ ပြီး ဘုရားကြည်ညို ( ရှိခိုး ) တယ် ။
နံနက် ၈ နာရီခန့် အရောက်မှာ နံက်စာစားတယ် ။ နံက်နက်စာ စားနေစဉ်မှာ သမီးတော်များက နဘေးနားမှနေပြီး အလှည့်ကျ ကမ္မဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပေးကြရတယ်။
နံနက် ၉ နာရီခန့်အရောက် ညီလာခံ မှာ အသင့် စောင့် နေပြီဖြစ်တဲ့ မှူးတော် မတ်တော်များကိုတောင်နန်းတော်ရွှေဆောင်ဦးမှာ အတွေ့ခံတယ် ။ အဲဒီ ညီလာခံမှာ ပထမဆုံး အဝေးကကြေးနန်းစာ၊လျှောက်တင်စာ ၊ ဆရာတော်တို့ သွင်းစာများဖတ်ကြားတာကို နားထောင်တယ် ။ အဝေးကရောက်လာတဲ့ခြေလျုင်တော် ၊ မြင်းလျင်တော် ၊ လှေလျှင်တော် ၊ ဓာတ်စီးတော်တို့ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များကို နားထောင်ပြီး မှတ်တမ်းးတင်စေတယ်။ တင်လျှောက်ချက်များကို နားထောင်ပြီး ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြင်းအရာများကို ဆွေးနွေး ဖြေရှင်းပြီး ညီလာခံသိမ်းတယ်။
ညီလာခံ ကွဲပြီးနောက်မှာ နန်းတော် နောက်ပိုင်းကိုဝင်ပြီး မိဖုရားများ သမီးတော်များနဲ့ တွေ့ကာ မေးသင့် တာမေး ၊ ဆွေးနွေးသင့် တာဆွေးနွေးတယ် ။ သတင်းထူး ၊ အကြောင်းထူး မရှိရင် တောင်နန်းတော် မှာ စာကြည့်တယ်။
နေ့လည် တစ်နာရီလောက်မှာ တောင်နန်းတော်မှာပဲ အချိုပွဲသုံးဆောင်တယ် ။ ပြီးရင် ဗိုလ်ရှုခံ ထွက်တော် မူတယ် ။ ဗိုလ်ရှုခံရာမှာတော့ လက်ရုံးဘက် သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိချည်းသက်သက်ဖြစ်ပြီး အမိန့်တော် မှတ်ရန်နဲ့ အမိန့်တော်ပြန်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းကြောင်း ရေကြောင်း ရာဇဌာနီမြို့စောင့် ၊ အဝေးမြို့စောင့်နဲ့ တပ်ပြောင်းတပ်လွှဲတို့ အကြောင်းကို အထူးဆွေးနွေးတယ်။
ဗိုလ်ရှုခံပြီးနောက် မှာ တောင်နန်းတော် နောက်ပိုင်းကိုဝင်ပြီး စာကြည့်ပြန်တယ်။
၅ နာရီလောက်မှာ နံ့သာဖြူနန်းတော်ကိုကူးပြီး သီးခြားခန့်ထားတဲ့အထောက်တော်များကို အတွေ့ခံတယ်။ ထောက်လှမ်းချက်များကို လက်ခံတယ် ။ အဲဒီထောက်လှန်းချက်တွေကို သင့်တော်တဲ့ မှူးမတ်များကို ခန့်အပ်ပြီး တိတ်တဆိတ် ထပ်မံစုံစမ်းစေတယ် ။ အရေးယူသင့်တဲ့ကိစ္စ အကြောင်းအရာများကို နံနက် ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေး အရေးယူတယ်။
ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ နံ့သာဖြူ နန်းတော်ကနေ ရွှေနန်းတော် ဦးကိုကူးပြီး ညညီလာခံမှာ အဆင်သင့် စောင့်နေကြတဲ့ မှူးကြီး မတ်ကြီးများကို အတွေ့ခံတယ် ။
ညညီလာခံ ကွဲပြီးနောက်မှာ ရွှေနန်းတော်အနောက်ပိုင်းဝင်ပြီး ဆင်ဖြူရှင်မ မိဖုရားဆောင်မှာ အချိုပွဲ သုံးဆောင်တယ် ။ အချိုပွဲတည်ပြီးနောက် မှာ ဝတ်လဲတော် များလဲပြီး စက်တော်ခေါ်မြဲ အခန်းတွေကို ဝင်တယ်။ စက်တော်ခေါ်တဲ့ အခန်းမှာ အလှည့်ကျမိန်းမစာတော်ဖတ်များ စာဖတ်တာကို နားထောင်တယ်။
ဥပုသ်နေ့တွေ မှာ ရုံးပိတ်ပြီး အလှည့်ကျ ဆရတော်များရဲ့တရားများကို နာယူမှတ်သားတယ်။
မင်းတုန်းမင်းရဲ့ အထောက်တော် များများခန့် အပ်ထားပုံမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှတယ်။
အဝေးမြို့များတွက် တစ်မျိုး ၊ ရာဇဌာနီအတွတွက်တစ်မျိုးထားတယ်။ အဲဒီ အထောက်တော်တွေကို ထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့နဲ့ မထင်မရှား ထောက်လှန်းရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး ဖွဲ့ထားပေးတယ်။ မထင်မရှားအထောက်တော် များထဲမှာ ဆရာသံဃာတော် ၊ မိဖုရား ၊ သားတော် ၊ သမီးတော် ၊ အပျိုတော် ၊ အရာရှိကြီး အရာရှိငယ် ၊ အစုကြီးမှုထမ်း ၊ အစုသေးမှုထမ်း ၊ အစုနုမှုထမ်း ၊ ဖိုးသူတော် ၊ မယ်သီလရှင် ၊ သမားတော် ၊ အနှိပ်တော် ၊ ဆတ္တာသည်စတာတွေပါဝင်ပါတယ် ။
ရာဇဌာနီ မှာထောက်လှမ်းရတဲ့ အထောက်တော်တွေထဲမှာ အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းအိမ်ကို ထောက်လှမ်း ရတဲ့ အထောက်တော်များလည်းပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မင်းတုန်းမင်းကြီးဟာ သူ့ကိုထီးနန်းရအောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကနောင်မင်းသားကို အိမ်ရှေ့အရာအပ်နှင်းထားပေမယ့် စိတ်ချ ယုံကြည်မှု မရှိကြောင်းပေါ်လွင်ပါတယ်။
မင်းတုန်းမင်းရဲ့ချစ်လှစွာသော သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ စုဖုရားလတ်ဟာလည်း အလယ်နန်းမိဖုရား ဆင်ဖြူရှင်မ
ဆောင်တော်မှာအထောက်တော် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ သူနဲ့အတူ တစ်ချိန်လုံးလိုက်ပါခစားနေတဲ့ ဆင်ဖြူရှင်မ ကိုလည်း မယုံပြန်ပါဘူး။
သရစိမ်းမိဖုရားကို ဘဏ္ဍာစိုး စာရင်းကိုင်အဖြစ်ခန့် အပ်ထားတယ် ။ မိဖုရားများ ၊ မင်းသား မင်းသမီးများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေ ကျောက်သံပထ္ထမြားစာရင်း ၊ အထည်လိပ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ အခန်း စတာတွေ တာဝန် ယူရပါတယ် ။ ဘဏ္ဍာစိုးဖြစ်တဲ့ သရစိမ်းမိဖုရားဟာ ညဘက် အဆောင်ပြန်အိပ်ခွင့် မရဘဲ အရှင်ဘုရင် စက်တော်ခေါ်ရာအခန်း သလွန်တော်ခြေရင်းမှာ သမီးတော်မိုင်းလုံ မြို စားနဲ့ အတူအိပ်ရတယ်တဲ့ ။ ဘဏ္ဍာစိုးဆိုတော့ မျက်စိအောက်ကနေ အပျောက်မခံတာလားမသိဘူး။
ဆရာမကြီး မကြန်ရဲ့ ” မင်းတုန်းမင်းကြီးဘာတွေလုပ် ” ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
← ရုံးပတီသီး ကို အစိမ်းတို့စားရတာ ကြိုက်ရင် ဒီစာလေးကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ပေးပါ
ဘာသာစကား ၁၅ မျိုးတတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဆိုတော်လုပ်ဖို့ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့ ဈေးသည်လေး →